“ကိုယ့်မှာ ရှိတာကို ပြပြီးစားချင်လို့ မော်ဒယ် ဝင်လုပ်တာ” လို့ အလှမယ်ရွှေအိမ်စည်က ပုရိသတွေကို ပြောပြီ(ရုပ်သံ) – Shwe Ba
“ကိုယ့်မှာ ရှိတာကို ပြပြီးစားချင်လို့ မော်ဒယ် ဝင်လုပ်တာ” လို့ အလှမယ်ရွှေအိမ်စည်က ပုရိသတွေကို ပြောပြီ(ရုပ်သံ)
Shwe MM | September 13, 2020 | Cele | No Comments
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အရာတွေကို ပြမစားရရင် ဘာကို ပြစားရမလဲ? ကျမ ရဲ့ ရင်သားတွေက ဘယ်သူ့ကို ဘာ လုပ်ထားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမ်းတွေ ဖီးလ် ဖြစ်ပြီးတော့ လိုက်ရန်တွေ မူနေကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒါကြီးက ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ ပေးနေတာပါ” လို့ ပြောလာတဲ့ အလှမယ် ၊ မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် ရွှေအိမ်စည်အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည် ကတော့ Miss အလှမယ်၊ မော်ဒယ် တစ်ယောက်ပါ။ ဆံပင် ရှည်ရှည်လေး နဲ့ ကျော့ရှင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိတဲ့သူမရဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာတွေက ပရိသတ်တွေကြားမှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားပါတယ်။ရွှေအိမ်စည်ကတော့ စကားပြော ရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်ပါတယ်။
သူမကို အမျိုးသား ပရိသတ်ထက် အမျိုးသမီး ပရိသတ်တွေက ပိုမိုသဘောကျအားပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ”ကိုယ့် ရဲ့ LOOK ကို ပြပြီး စားချင်တဲ့ အတွက် ဒီ Modeling Industry / မော်ဒယ်လောက ထဲကို ဝင်လာတာလေလို့ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့ အရာတှကေို ပွမစားရရငျ ဘာကို ပွစားရမလဲ? ကမြ ရဲ့ ရငျသားတှကေ ဘယျသူ့ကို ဘာ လုပျထားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမျးတှေ ဖီးလျ ဖွဈပွီးတော့ လိုကျရနျတှေ မူနကွေတယျ။ တကယျတော့ ဒါကွီးက ပြျောရှငျမှုတှပေဲ ပေးနတောပါ” လို့ ပွောလာတဲ့ အလှမယျ ၊ မျောဒယျ ၊ သရုပျဆောငျ ရှအေိမျစညျအကွောငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ရှအေိမျစညျ ကတော့ Miss အလှမယျ၊ မျောဒယျ တဈယောကျပါ။ ဆံပငျ ရှညျရှညျလေး နဲ့ ကြော့ရှငျးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု အပွညျ့ ရှိတဲ့သူမရဲ့ ဟနျပနျအမူအရာတှကေ ပရိသတျတှကွေားမှာ အတျောလေးကို ရပေနျးစားပါတယျ။ရှအေိမျစညျကတော့ စကားပွော ရငျလညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတတျပါတယျ။
သူမကို အမြိုးသား ပရိသတျထကျ အမြိုးသမီး ပရိသတျတှကေ ပိုမိုသဘောကအြားပေးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ”ကိုယျ့ ရဲ့ LOOK ကို ပွပွီး စားခငျြတဲ့ အတှကျ ဒီ Modeling Industry / မျောဒယျလောက ထဲကို ဝငျလာတာလလေို့ ပွောဆိုလိုကျတာပါ။
THE VOICE MYANMAR မှာဖြစ် ခဲ့တဲ့ အမှတ် တမဲ့ အဖြစ် အပျက်ကြောင့် နီနီခင်ဇော်အ ပေါ် ဝေဖန်နေကြခြင်းကို ရန်ရန်ချမ်းပြန်လည်ဖြေရှင်းပြီ
ရာဇာနေဝင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက် ခဲ့တုန်းက ရယ်လဲ ရယ်ရ ရှက်လဲ ရှက်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရ တစ်ခုကို ပြောပြ ခဲ့တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်